"Raha oharina tamin’ny taona 2007 ny fanomanana dia nanahirana ihany. Soa fa nanana mokondoha izahay ny hiaro hatrany ny voninahitsika amin’io lalao io ary hiezaka ny hitana ny laharana voalohany hatrany", hoy i Rosa Rakotozafy, fiohan’ny kaomisionan’ny atleta amin’ity lalao ity.
"Tokony hojerena manokana izahay atleta amin’io, satria saika ny atletisma hatrany no nahazoantsika medaly betsaka indrindra hatramin’izay", hoy izy nitondra ny tenin’ireo namany.
Nampanantena ny tsy hijery fotsiny ny ezaka nataon’ireo atleta teto ny minisitry ny Fanatanjahantena, Ndremanjary Jean André, nanditra ny fitsidihany indray azy ireo omaly teny amin’ny kinjan’Alarobia.
"Aza misalasala ny miresaka amiko ianareo atleta fa hidina matetika eny aminareo aho any an-toerana. Raha misy ny olana dia ezahintsika ny hamahana izany avy hatrany", hoy izy. Tsy hadinony ihany koa ny nampanantena tamby an’ireo rehetra izay mitondra medaly volamena teto. "Tsy maintsy lasa mpanampitrisa ianareo izay mahazo izany rehefa miverina", hoy izy. Atleta 52 (26 lahy sy 26 vavy) miampy mpanazatra 5, mpitsara 1 ary mpitantana 4, no nandrafitra ny delegasiona malagasy eo amin’ity atletisma ity.